Flexible Metallic Conduit Abavelisi kunye nabaxhasi - China Flexible Metallic Conduit Factory
Uhlobo lweJSG-Uhlobo oluPhuculweyo loMjelo
Ithumbu le-JSG lucingo olwenziweyo olunamatye olomeleleyo olubunjiweyo kumbindi wedonga lwe-JS tube, kwaye inokumelana nobushushu obuhle, esetyenziswa kwindawo enobushushu obuphezulu.
Ubume be-PVC / i-PU yokuhambisa umjelo wentsimbi yi-Strip-inxeba yentsimbi yentsimbi, iprofayili ye-PVC sheathing kunye ne-Zinc ejijelwe ngebhanti yentsimbi, isakhiwo esine-hook, i-TPU sheathing. Idangatye elidodobeleyo yi-V0 (UL94). Isidanga sokukhusela yi-IP68.
Inkcazo emfutshane isidanga sokukhusela yi-IP40. Iipropathi zomjelo wesinyithi ubhetyebhetye, ukuzolula, ukunganyanzeleki ecaleni. Ubume bezinki zilinxitywe inxeba lebhanti yentsimbi, iprofayili enamakhonkco kunye nomjelo wenxeba osisinyithi.
Ithumbu lesinyithi lesinyithi esingenasici linxalenye ebalulekileyo kushishino lwale mihla. Imibhobho yesinyithi engenazintsimbi isetyenziswa njengocingo kunye neetyhubhu zokukhusela iintambo kwiingcingo, iintambo, imiqondiso yezixhobo ezizenzekelayo, kunye nemibhobho yeshawari yoluntu, eneenkcukacha ukusuka kwi-3mm ukuya kwi-150mm. Ithumbu lesinyithi esincinci esincinci esincinci (ubukhulu be-3mm-25mm) ubukhulu becala sisetyenziselwa ukukhusela isekethe yesenzisi yomlawuli ochanekileyo wokujonga kunye nokukhuselwa kwesekethe yoluvo lweshishini.
Umjelo wentsimbi ngePVC Sheathing
Iityhubhu ezikhuselayo ezisetyenziselwa ukunxiba iingcingo kunye neentambo kwiindawo ezahlukeneyo zihlala zirhabaxa zetyhubhu ezenziwe nge-PVC, ezingenakukhusela kuphela iingcingo kunye neentambo, kodwa kuthintela ukuvuza kombane; Banokucwangcisa imigca kwaye bafeze iziphumo ezintle.
Umjelo wentsimbi nge-PU Sheathing
Iiplastikhi ezenziwe ngeplastikhi ezenziwe ngethumbu zenziwe ngethumbu lesinyithi kunye nemibhobho yesinyithi ebhijelweyo, egalelwe umaleko wezinto ze-PU ecaleni komda we-concave kunye ne-convex kumbindi wodonga lwetyhubhu. Ngenxa yeenzuzo zobunzima bokukhanya, ubhetyebhetye obugqwesileyo, amandla oxhulumaniso kunye nezixhobo, ukusebenza kombane, ukumelana neoyile, ukuxhathisa kwamanzi, njl njl. amanye amashishini.